Trincomalee ~ Journey-Assist - Inona no atao. Foto-drafitr'asa. Torapasika sy zavatra mahasarika
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Trincomalee
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Trincomalee
Trincomalee dia tanàna kely any Sri Lanka any amin'ny morontsiraka avaratra-atsinanana. Ny 240 km ny halaviran'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena akaikin'ny Colombo. Trincomalee no malaza amin'ny resorts rehetra any atsinanan'i Sri Lanka. Izy io dia ao amin'ny helodrano iray izay miaro amin'ny rivotra na aiza na aiza. Raha ampitahaina amin'ireo trano fandraisam-bahiny Sri Lankan hafa, ny rivotra dia milentika sy sultry. Rehefa mandeha ny fotoana sisa tavela ny trano fandraisam-bahiny, dia tsara ihany ny toetr'andro any Trincomalee.
Na dia lavitra ny seranam-piaramanidina lehibe aza ity tanàna ity (maharitra 8 ora eo ho eo), dia malaza amin'ny mpizahatany. Tsy feno olona i Trincomalee ary tsy afaka mirehareha fotodrafitrasa tsara fa manana ny mpankafy azy.
Inona no tokony hatao any Trincomalee
Tsy ny fialam-boly mahery vaika eto. Ho an'ireo mpankafy lanonana sy ny mpankafy alina dia tsy mety io tanàna io. Amin'ny ankapobeny, amin'ny resaka fialamboly, Sri Lanka dia tsy dia mampanantena loatra. Amin'ny tranga sarotra, azonao atao ny mikaroka azy ireo any amin'ny morontsiraka andrefan'ny firenena. Ary ny tombony lehibe amin'ny Trincomalee dia fialan-tsasatra milamina, ny toetra voajanahary ary ny tora-pasika lehibe. Mino tanteraka izany fa ny tora-pasika tsara indrindra any Sri Lanka dia mipetraka eto.
Fotodrafitrasa any Trincomalee
Ny foto-drafitrasa amin'ity hotely ity dia novolavolaina be. Tsy tonga hatrany amin'ny ambaratongan'ny andrefan'ny Sri Lanka, tsy resaka akory, ohatra, i Thailandy. Na izany aza, saika ny zavatra rehetra ilainao dia misy eto. Any amin'ny faritra afovoan'i Trincomalee dia misy ny sampana banky, birao fifanakalozana, baza ary fivarotana. Tsy misy ny toeram-pivarotana lehibe sy tranombarotra lehibe, na izany aza ny zava-dehibe indrindra ary saika misy vokatra foana. Azo alaina koa ny fivarotam-panafody, saingy tsara kokoa anefa raha maka kitapo fanampiana voalohany miaraka aminao. Tsy misy toeram-pitsaboana feno, raha te hiatrika fitsaboana ara-pahasalamana lehibe dia mila mandeha any Colombo ianao.
Manakaiky ny torapasika eo an-toerana - Nilaweli sy Uppuveli, tsy misy banky sy fivarotana fa misy fifanakalozana, fividianana bisikileta ary tuk-tukers eto. Ampy izany amin'ireo toerana ireo sy trano fisakafoanana ho an'ny mpizahatany, anisan'izany ny bara miasa mandra-paharivan'ny alina marina eny amin'ny torapasika Tsy misy sampana sampan-draharahan'ny fitsangatsanganana ahafahanao mitsangatsangana, fa misy mpaninjara manokana. Eo ihany koa ny ivon-tsakafo. Ankoatr'izay, ny filaharan'ny fitsangatsanganana sy ny fifindrana amin'ny tuk-tuk dia azo atao amin'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny.
Marina fa misy olana ny fividianana toaka eto. Mazava ho azy fa amidy any amin'ny fivarotana manokana ihany ny alikaola any Sri Lanka. Ary tsy maro amin'ireto. Ao Trincomalee, tsy lavitra ny moron-tsiraka any Uppuveli sy Nilaweli izy ireo. Mazava ho azy, misy alikaola any amin'ny trano fisakafoanana akaikin'ny tora-pasika, fa miaraka amin'ny sisiny lehibe.
Ny toetr'andro any Trincomalee. Rahoviana no fotoana tsara indrindra handehanana?
Trincomalee no nanjaka tamin'ny hafanana sy vaovao nandritra ny herintaona. Hafa noho ny tanànan'ny Sri Lanka any Sri Lanka izay tsy misy fizarazarana amin'ny taona izay vanim-potoana "avo" sy "ambany". Amin'izany, ny volana Mey, manomboka ny orana amin'ny ankamaroan'ny nosy, fa amin'ity volana ity dia maina ny Trincomalee; avy ny orana, na dia misy aza, nefa vetivety dia mandeha izy ireo. Matetika izy ireo dia amin'ny alina sy amin'ny hariva. Ary mba tsy hahita rahona eny amin'ny lanitra mihitsy, dia tokony ho avy amin'ny Janoary ka hatramin'ny aprily ianao. Amin'izao vanim-potoana izao, ny rivotra ao an-toerana dia manafana hatramin'ny +30, ary ny mari-pana amoron-dranomasina average +29.
Toerana manodidina an'i Trincomalee
Indray andro monja dia ampy handinihana ireo zava-bita mahaliana any Trincomalee. Tena malaza ny mpizahatany miaraka amin'ny nosy Pigeon kely, 2 km miala an'i Trincomalee. Mahatratra 500 m fotsiny izy io, fa misy beach feno. Matetika tonga eto amin'ity nosy ity ireo mpanamory, satria rehefa miala voly amin'ny tora-pasika sy mandeha mitsangatsangana eny an-tanàna dia tsara kokoa ny mitsonika ao anaty rano hahafinaritra ny hakanton'ny vatohara. Ity nosy ity dia ampahany amin'ny valan-javaboary nasionaly. Ny vidin'ny fidirana dia takiana.
Ao amin'ny faritra afovoan'i Trincomalee, dia i Frederick taloha, izay mbola ampiasaina ho fototry ny tafika mitam-piadiana ao Sri Lanka. Mandritra izany fotoana izany dia avela hiditra any ny mpitsidika. Ny tanàna mimanda dia naorina tamin'ny taonjato faha-17 nataon'ny kolonelyista avy any Portugal. Amin'ny maha-fitaovana fananganana azy, ny sisa tavela amin'ny tempolin'i Sri Lankan tranainy indrindra - ny sakafo voasary - no nampiasaina. Antsoina koa hoe tempolin'ny arivo tsanganana io. Ity tempoly ity dia hita eo amin'ny vatolampin'ny Swami Rock ary natokana ho an'i Shiva. Betsaka ny harona voninkazo sy voankazo vokarina any an-toerana. Avy amin'ny vatolampy izay ijoroan'ny tempoly, misokatra ny sary mirakitra ny tanànan'i Trincomalee. Zato metatra miala ny tempoly no toerana mahafinaritra, izay nahazo ny anarana romantika hoe "Jump of lovers". Ny tantaran'ny zanaky ny manamboninahitra iray avy any Holandy no nitsambikina indray, noho ny fitiavana tsy voaloa.
Rehefa mandehandeha any Trincomalee, sarotra ny tsy mahatsikaritra fa tanàna manana finoana marobe. Ho fanampin'ny tempoly ho an'ny Hindus sy Buddhists, dia manana moske sy fiangonana kristiana koa izy. Ny tranobe ara-pinoana dia miorina ny tempolin'i Hindus Sri Patrakali, izay eo amin'ny faritra afovoan-tanàna. Betsaka ny lakilasy sy sarivongana misy sarin andriamanitra mijoro eo amin'ny endriny. Na dia eo aza ny habe keliny, ity tempoly ity dia toa mahavariana.
Mahatratra 30 km ny morontsiraka Trincomalee. Mizara ho torapasika 3 izy ireo: Nilaweli, Upuveli sy ny torapasik'i Trincomalee tenany. Mandritra ny faran'ny torapasika ireo, maro ny eto an-toerana no miala sasatra foana. Tsy milamin-tsaina ny fialan-tsasatra noho ny fiheverana feno loatra an'i Sri Lankans amin'ny vahiny.
Upuveli dia manana fotodrafitrasa tsara kokoa kokoa. Ao amin'ny faritaniny dia misy safidy fonenana isan-karazany ho an'ny trano fonenana - villa, hotely, trano fandraisam-bahiny, bungalow. Afaka mihinana milamina sy malefaka ary mahasalama any amin'ireo trano fisotroana misy any ianao. Eo koa ny fanofa-trano mavesatra amin'ny sun loungers sy fitaovana scuba. Tena malalaka io tora-pasika io ary tsy feno olona. Kely kely ny mavo eo amboniny.
I Nilaweli dia azo antsoina hoe morontsiraka lavitra kokoa noho Upuveli. Ao amin'ny faritaniny dia vitsy ny olona. Ny fotodrafitrasa eto dia tsy dia fivoarana. Na izany aza, ilay toerana ity dia manana fomba fijery mahafinaritra kokoa. Ny rano amoron-tsiraka dia ahitana ny fangaraharana saika tonga lafatra. Ny morontsiraka dia rakotra fasika beige. Avy amin'ny morontsiraka, matetika ianao dia mahita trozona mitsinkafona ao amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Ahoana ny fomba hidiran'ny Trincomalee
Trincomalee no misy 270 km miala an'i Colombo renivohitra ary 240 km miala ny seranam-piara-manidina. Bandaranaike. Ity tanàna ity dia manana rohy mitondra fitaterana miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny hafa sy ireo tanànan'ny Sri Lanka lehibe indrindra. Na izany aza, matetika, ho tonga aty Trincomalee, dia mila manao famindrana ianao. Ao anatin'ny 1 andro mazava, na izany aza dia mbola mety ho tonga any Trincomalee avy any amin'ny saika any Sri Lanka. Mila miala amin'ny fotoana ihany ianao ary mieritreritra momba ny lalanao.
Avy amin'ny toerana lehibe eto amin'ny firenena eto Trincomalee dia mora ny tonga:
Avy any amin'ny seranam-piara-manidina mankany amin'izy ireo. Bandaranaike: haka taxi mivantana any Trincomalee na haka taxi iray any amin'ny gara na gara na gara dia avy eo mandeha bus na lamasinina mankany Colombo mankany Trincomalee.
Avy any Colombo: amin'ny lamasinina amin'ny alina na fiara fitateram-bahoaka mivantana. Handeha hatramin'ny 10 ora ny dia. Mandeha ny fiara fitateraka mandritra ny antoandro isaky ny antsasak'adiny ary imbetsaka amin'ny alina. Azo atao koa ny hahatongavana any Batikaloa amin'ny lamasinina atoandro, avy eo dia asiana famindrana bisy any.
Avy any Negombo: mandeha amin'ny fiara fitaterana matetika imbetsaka isan'andro. Maharitra 9 ora ny dia. Amin'ny fiaran-dalamby eto no azo atao ny mandeha fotsiny.
Avy any amin'ny toerana atsimo atsinanana (Bentota, Hikkaduwa, Mirissa, Galle, Tangale, Unawatuna): alao ny bus bus 49. Mandao indroa isan'andro ao amin'ny Tangale izy ary mandalo isaky ny morontsiraka.
Avy any Kandy: farafahakeliny in-7 isan'andro, bisy mivantana amin'ny 45 isa miala avy eto, dia 7 ora ny dia.
Avy any Anuradhapura: a bus iray miala eto matetika mankany Trincomalee isan'andro, maharitra 3 ora ny dia.
Avy any Badulla: avy eto no mandeha ny laharan'ny bus 218.
Avy any Jaffna: fitateram-bahoaka mivantana na famindrana lamasinina mankany bus amin'ny alàlan'ny Vavuniya.
Avy any Ella: amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka mivantana mandeha in-1 isan'andro isan'andro amin'ny 17:50, na amin'ny fiaran-dalamby na fiara mankany Kandy, ary avy eo dia azo atao ny mamindra fitateram-bahoaka.
Avy any amin'ireo tanàna afovoan-tanàna (Haputale, Nuwara Eliya, sns): amin'ny lamasinina na fiara fitaterana mankany Kandy na Badulla, ary avy eo nafindra ao anaty bisy. Azo atao koa ny mandeha bisy mankany Batticaloa, ary avy eo mifindra amina bisy hafa.
Avy any Arugam Bay: amin'ny fiara fitateram-bahoaka, afindra any Kalmunai na Batikaloa. Misy bisy miala eto matetika ary tsy mandeha any Trincomalee.